TOROMARIKA FAMENOM-PANAZAVANA MIKASIKA NY FANADINANA FIHODINANA FAHAROA - Police Nationale Malagasy
408637 ème page consultée et vous êtes 273963 ème visiteur.
TOROMARIKA HO AN’NY MPIADINA AFAKA TAMIN’NY FANADINANA FIHODINANA VOALOHANY KA HIATRIKA NY FANADINANA FIHODINANA FAHAROA AMIN’NY FIFANINANA HANDRAISANA MPIANATRA HO POLISY
TAONA 2020-2021 Toromarika
1- TOROMARIKA ANKAPOBENY :
– Ny fanadinana fihodinana faharoa dia ho tanterahana manomboka ny 31 mai 2021 ka hatramin’ny 03 jona 2021 amin’ireto foibem-panadinana miisa 11 manaraka ireto : ANTANANARIVO, TOAMASINA, ANTSIRANANA, MAHAJANGA, FIANARANTSOA, TOLIARA, ANTSIRABE, AMBOSITRA, MANAKARA, MORONDAVA ARY TOLAGNARO. Koa izay mpiadina afaka tamin’ny fanadinana fihodinana voalohany, na inona na inona sokajim-panadinana misy azy, tao amin’ireo toerana ireo dia ao ihany izy no manao ny fanadinana fihodinana faharoa.
– Mikasika ny mpiadina afaka fanadinana fihodinana voalohany tamin’ireo foibem-panadinana hafa kosa dia toy izao manaraka izao :
– Izay afaka tao amin’ny foibem-panadinana Ambatondrazaka dia manao ny fihodinana faharoa ao amin’ny foibem-panadinana TOAMASINA;
– Izay afaka tao amin’ny foibem-panadinana Sambava dia manao ny fihodinana faharoa ao amin’ny foibem-panadinana ANTSIRANANA ;
– Izay afaka tao amin’ny foibem-panadinana Antsohihy dia manao ny fihodinana faharoa ao amin’ny foibem-panadinana MAHAJANGA;
– Manatona ny « Direction Régionale de la Sécurité Publique (DRSP) » misy ny foibem-panadinana hanaovany fanadinana fihodinana faharoa ny mpiadina afaka tamin’ny fanadinana fihodinana voalohany manomboka ny 28/05/21, hijery ny « Groupe de candidat » misy azy sy ny fandaharam-potoana ary ny toerana hanaovana ny fanadinana.
– Ny andinindininy mikasika ny fanadinana, toy ny taranja hanadinana, dia mila mijery ny Arreté Interministeriel N° 28329–28330–28331-28332 /2020 tamin’ny 26/11/2020 ny mpiadina, izay hita ao amin’ny “site web de la Police Nationale” : https://www.pn.gov.mg. Na koa ao amin’ny « Facebook » pejy « POLISIM-PIRENENA MALAGASY »
– Mandritra ny fotoam-panadinana dia tsy maintsy mitondra « Carte d’Identité Nationale » sy manaja ny fepetra rehetra mikasika ny hamehana ara-pahasalamana toy ny fitondrana aro vava sy orona, ny elanelana 1metatra, ny fihetsika tokony sy tsy tokony atao.
2- MIKASIKA NY “VISITE MEDICALE CM2” :
– Ny “Fiche Médicale” (CM2) dia tsy azon’ny mpiadina sokafana fa atolotra ny tompon’andraikitry ny fanadinana rehefa manao ny adina am-bava. Ampatsiahivina ny mpiadina fa amin’ny « Centre Hospitalier Régional (CHR) » sy « Centre Hospitalier Universitaire (CHU) » irery ihany no hanaovana izany.
3- MIKASIKA NY “CONTRE-TOISE” :
– Ny “Contre-Toise” dia ho tanterahina amin’ny mpiadina mandritra ny andro hanaovana ny fanadinana.
4- MIKASIKA NY “ENQUETE DE MORALITE”
– Afaka manao izany amin’ny « Direction Régionale de la Sécurité Publique (DRSP) akaiky azy ny mpiadina hatramin’ny 30/05/21.
5- SAMIHAFA :
– Raha mila fanazavana fanampiny dia manantona ny « Service Central du Recrutement” Anosy Antananarivo na ny « Direction Régionale de la Sécurité Publique (DRSP) » isam-paritra.